AVI Jabbuuti: Sida loo Beddelaan AVI in ay Jabbuuti
> Resource > Beddelaan > Sida loo Beddelaan AVI in ay Jabbuuti
Sida loo Beddelaan AVI si Jabbuuti
Qaab file AVI ma aha qaab video wanaagsan ah dooqa video qaybsiga ay sabab u tahay waa size waaweyn oo wakhti ka sii dheer looga baahan yahay inay geliyaan gal internetka. Qaab file Jabbuuti ayaa, dhinaca kale, waa shaki ku jirin qaabka la jecel yahay, sababtoo ah waa size yar oo tayo wanaagsan leh. Sidaas, haddii aad rabto in lagu daro videos gal website-ka, mid ka mid ah xalka ugu fiican waa in loogu badalo files AVI in ay Jabbuuti ah. Si taas loo sameeyo, waxaad u baahan doontaa AVI ah laga maarmi karin in Converter Jabbuuti.
Qeybta 1: Best AVI in ay Jabbuuti Video Converter
Qeybta 2: AVI Free in ay Jabbuuti oo Converter
Qeybta 3: AVI Online in ay Jabbuuti oo Converter
Qeybta 4: Extended Knowlege u AVI iyo Jabbuuti
Taageerada diinta file qaab kale sida MP4, FLV, MOV iyo iwm
Beddelaan ilaa 30 jeer ka dhakhsi.
Edit iyo shakhsiyeeyo videos hor diinta.
Download ka goobaha video qaybsiga online oo caan ah.
Sida loo badalo AVI ah in ay Jabbuuti
Maqaalkani waxa uu ku siinayaa tutorial ah diinta aad kombuutarka Windows-ku-saleysan. Waxaad isticmaali kartaa Video Converter Ultimate ah si loogu badalo files AVI si aad u effortlessly oo aan ku allabaryaya tayada file ee Jabbuuti.
1. Ku dar files gal Converter ah
Guji ku Add Files button xitaa dooro files AVI aad in uu ku kaydsan PC ama kuu jiidin-iyo-tagi karaan faylasha AVI kuwaas oo u gal barnaamijka si toos ah.
2. presets filaayo
Riix Qaabka Output button dhinaca midig ee interface ka xitaa iyada oo liiska. U yeelan doontaa in ay helaan oo ay doortaan Jabbuuti ee Waxaad Qaabka> Web category.
3. Dooro qaab iyo badalo
Riix Beddelaan on geeska hoose ee midigta ah interface ay u bilaabaan diinta files AVI si aad u Jabbuuti. Markii diinta la dhammeeyo, waxaad riixi kartaa Folder Open 's button in la furo gal meesha files wax soo saarka ayaa la badbaadiyey.
Talo More: Haddii aad jeclaan doonaa si xaalkaa files AVI ka hor diinta, waxa kale oo aad samayn kartaa in la editor dhisay-in hawlo tafatirka awood leh ay, sida falinjeeerka, saamayn ku daray, watermark, subtitles iyo iwm
# 1. Free Video Converter: Wondershare Free AVI in ay Jabbuuti oo Converter
Si fudud u dejisan aad jeceshahay ama wax goobaha video qaybsiga caan ah oo ka dibna u badalo ah ee loo maqli karo ku dhawaad ​​nooc kasta oo qalabka la qaadi karo.
Pro: Lacag la'aan.
1. Xawaaraha joogtada ah ee diinta.
2. Qaab xaddidan, wax soo saarka marka la barbardhigo Video Converter Ultimate.
3. Guban karaa DVDs u gaar ah.
Qeybta 4: Aqoonta Extended u AVI iyo Jabbuuti Qaabka
AVI waa weel multimedia ay ku jiraan xogta audio iyo video labadaba. Waxa ay u ogolaataa audio-la-video loo maqli synchronous. Files AVI taageeraan badan audio geeyo iyo video Jabbuuti oo waa weel caadi ahaan loo isticmaalo si ay u kaydiso kartoon ama flash ku salaysan video sawiro. Waxaa la doorbiday, maxaa yeelay baaxadda file dhabta ah waa mid aad u yar.
Macluumaad faahfaahsan oo ku saabsan qaab file AVI ah
Top 3 AVI Players u Mac Macluumaad faahfaahsan oo ku saabsan qaab file Jabbuuti oo ah